I-Toe Enkulu Indifundise Isifundo Ngokungabikho Kulula
Amanyathelo okuthabatha kwi-Dis-easy to Ease
Nanini na xa ubhekene nokungahlaziyi okanye ukuphazamiseka kwakho ukukhathazeka ngokubalulekileyo kukuba uphathe umgangatho wenyama. Ukuba awuyiqondi ngokugcweleyo into ojongene nayo, ngoko ukufumana ukuxilongwa kuyisinyathelo sokuqala. Emva kokugqithiswa kokuqala kuphethwe kwaye uphantsi kolawulo ngoko unokuzama ukuhlalutya isifundo esiyilungiselelo okanye ukukhuphaza ukufundisa. Ukuthatha yonke inkcazelo oyifumayo kukunyuka ukuba wenze utshintsho okanye utshintshe imiphina engxaki okanye iipatheni eziphazamisayo ukuze ugweme ukufumana nayiphi na into ephindayo.
Phatha iMilwel / I-Disase-easy
Ukuqonda Isifundo Ukunikezelwa Kwezifo / Ukulimala
Tshintsha indlela yokuziphatha / iPatheni
I-My Big Toe yangifundisa Isifundo
Ngesinye ixesha ndaziva ndibuhlungu xa ndijikeleza umbhede wesikhonkwane sezandleni zami zokunene. Ekuqaleni ndacinga ukuba kwakusenokubangela ukucaphukisa kwi-ingenwn ingrown engangena ngaphakathi kwesikhumba ebangela ukuba ndihlaziye. Ndiyinto engathandabuzekiyo kunezikhonkwane zezinyosi ezinjengezinyosi kwaye uzama ukugcina izikhonkwane zami zilungiswe ukuba ziphephe intlungu ehambelana nale nto.
Inyosi Yami yayineRash kunye neFure
Ndayigungqa iimbambo zam, ndaza ndazinya zombini iinyawo zam esitini samanzi afudumele kunye netyuwa e-Epsom. Emva koko, ndambethe ibhedi yekhopi kunye ne-iodine ngaphambi kokulala ukukhusela nayiphi na intsholongwane. Ngentsasa i-topping and purplish streaked stemlen toe yavuthayo yandenza ndacinga ukuba ndinefuthe. Inzwane yam yayishushu kwaye ithambile kumgca kodwa ayizange ibonise impawu yepuss okanye i-liquid ebonisa ukusuleleka.
Inzwane yam inomlilo kunye nomkhuhlane. Andizange ndiyazi ukuba kutheni ngokuqinisekileyo, kodwa ndaqala ukukrokrela ukuba ndilunywe yinambuzane okanye isicangci esasibonakala silele kwizandla zamabhotile.
Kwinqanaba elingokomoya ndiyayiqonda into yokuba isicangca sasifundisa ngokubetha inzwane. Landifundisa ukuba ndijonge ngokuthe ngqo kumzimba wam ophantsi.
Isifundo sam sinesidingo sokugxininisa ekumanyeleni okanye kumisela umzimba wam emhlabeni . Duh ... Ndiyaqonda ukubaluleka kokumisela. Kodwa, ngelo xesha ixesha lam intloko yayiye emafini, ngoko isikhumbuzo sifike ngexesha. Ekugqibeleni ndavuya ngenxa yesigqabi sokuluma njengoko kungabonakali. Ukuphazamiseka kwam kwakungancinci, kodwa ngokwaneleyo ukukhathazeka ukuba ndiqwalasele. Ndayifumana isigidimi ngokucacileyo nangokucacileyo -Qalisa amandla akho- ngaphandle kokuba ube nesifo esibandezelekileyo esinjengezwane eziphukileyo okanye i-ankle.
Ngaba Uyayigxeka Ubunzima Bakho Bombutho?
Naliphi na ixesha ufumana ukulimala ezinzwaneni zakho, iinyawo, okanye ii-ankle - nokuba ngaba kungenakonakala njengokuba unganyameki unyawo lwakho okanye unyuke inzwane uhamba ukusuka kwigumbi lokulala ukuya ekhitsini Oku kunokuba ibonisa ukuba bayayigxina umzimba wakho ophantsi kwaye ungazitholi kakuhle ngokwaneleyo kumthombo wokukhusela umhlaba onokufumaneka kuwo wonke umntu.
Uye watshelwa kaninzi ukuba "ukubaluleka" kubalulekile? Kuthetha ukuthini ukuba ungabanjwanga nantoni na? Ukuthatha i-quiz grounding iya kunika izikhokelo malunga nokuba zeziphi iimpawu onayo, nokuba ngaba izenzo ezithathayo okanye ukuphendula kwakho zikunceda ukuba uhlale phantsi okanye ngokwenene uncedo lokuzikhusela ngamandla.
Qaphela: Inambuzane kunye nezilwanyana ezinqabileyo zingabonakali kwaye azifanele zinyanzeliswe. Khangela malunga neenkcukacha ezivela kuVincent Iannelli, i-Pediatrics Expert malunga nokunyanga kwama-insects and stings.
Emva kokufa komntwana: Inkqubo yokulila
Isikhokelo sentombazana engokomoya yokutshata
UYifeta - uMfazwe noMgwebi
Ubuzenzisi BamaKristu: Ngaba Usemngciphekweni?
I-Kentucky State University Admissions
Amahlaya kaMichelle Obama
Ukuthenga i-Bike efanelekileyo